Guqula iPro: UkuKhokelela kuKwenziwa kunye ne-imeyile yokungena kwiPlagi yePlagi yeWordPress | Martech Zone
Guqula iPro: UkuKhokelela kuKwenziwa kunye ne-imeyile yokungena kwiPlagi yePlagi yeWordPress
NgoMvulo, Oktobha 19, 2020 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Douglas Karr
Ukunikezelwa kolawulo lwe WordPress njengenkqubo yolawulo lomxholo, kuyamangalisa ukuba ingqwalaselo encinci ihlawulwa njani kwiqonga lesiseko ngokwenyani guquka. Phantse lonke ushicilelo-nokuba lishishini okanye ibhlog yakho-lujonga ukuguqula iindwendwe zibe ngababhalisi okanye amathemba. Nangona kunjalo, akukho zinto ziphakathi kweqonga eliphambili ukulungiselela lo msebenzi.
Guqula i Pro iplagi ebanzi yeWordPress ebonelela ngokutsala kunye nokuwisa umhleli, izinto eziphendulayo eziphathwayo, kunye ne-plugin engazukutsala isantya kwindawo yakho yeWordPress. Iplagi ibonelela ngenkululeko epheleleyo yoyilo, izinto ezibangela isimilo, inetoni yokudityaniswa, kunye netoni yeetemplate ezintle ukuqala ngazo.
Khuphela ukuguqula iPro for WordPress
Guqula i-Pro-ye-imeyile yokungena kunye ne-plug-in yeGeneration
Guqula i Pro yeyona iplagi elula nephumelelayo yeWordPress enokuthi isetyenziswe ngabathengisi be-Intanethi, iibhlog, iiwebhusayithi zorhwebo, abaphuhlisi kunye nawo onke amashishini amancinci namakhulu anqwenela ukwandisa uguquko kwiiwebhusayithi zawo. Iimpawu zibandakanya:
Phuma kwitekhnoloji Nge-Convert Pro ungabamba ngokulula ukushiya iindwendwe. Uyilo kunye nemiyalezo emtsalane yokutsala umdla!
Uvavanyo olulula lwe-A / B -Uvavanyo lwe-A / B lwe-Convert Pro likuvumela ukuba wenze iiyantlukwano, uzivavanye, kwaye ugcine ezona zilungele abaphulaphuli bakho.
Amanyathelo amaninzi avelayo -NguPhuculo lwePro, unokwenza amanyathelo ahlukeneyo njengama-popups okuqinisekisa ubudala, ewe akukho popups, nokunye okuninzi!
Ukuphendula ngokupheleleyo -Guqula iprojekti iphendula ngokupheleleyo. Zonke izinto eziyilwe kusetyenziswa le iplagi sisixhobo, umsebenzisi kunye noGoogle onobuhlobo.
Cofa iiPopups -Ngaphandle kokhetho olukhulu lwezinto ezinokubangela, unokwenza kwakhona izinto ezivelayo ezibonakala xa abasebenzisi becofa u isicatshulwa, umfanekiso, iqhosha, njl.
Ukujolisa phambili Sebenzisa ukuguqula iprojekhthi kwaye wenze imiyalezo ebhalwe igama lakho enokubonakaliswa ngexesha elifanelekileyo, phambi kwabaphulaphuli abafanelekileyo.
Ukuhlanganiswa kwe-imeyile -Guqula i-Pro isebenza ngaphandle komthungo kunye nabaphenduli abazenzekelayo kunye nabanikezeli bokuthengisa nge-imeyile. Ngokungenisa okungafaniyo kunye nokusebenza kwamanye amazwe, idatha yakho ye-imeyile exabisekileyo ngoku isebenza ngakumbi kwaye i-agile. Ukudityaniswa konqakrazo olunye kwenza kube lula ukusebenza kuseto olukhawulezayo lokubamba nokulawula idatha ekhokelayo.
Guqula i Pro Yiplagi eqinileyo eya kukunceda ukuba wakhe uluhlu lwe-imeyile, uqhube ukugcwala, ukhuthaze iividiyo, ukhuthaze ukubonelela, kwaye wenze uninzi lwentengiso yakho. Ukuba ujonga isixhobo sentengiso esinjengale, Guqula i-Pro lukhetho olunokufikeleleka!
Guqula iPro imeyile yokuDityaniswa kokudityaniswa
Umdibaniso ubandakanya ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Campaign Monitor, Campayn, CleverReach, Qha ga mshelwano, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, Mailchimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, SendinBlue, Sendlane, SendReach, Sendy, SimplyCast, TotalSend, VerticalResponse, kunye noZapier.
tags: vavanyoActiveCampaignAWeberNiseloI-Monitor MonitorCampaynCleverreachQha ga mshelwanoGuqula proGuqula iFoxGuqula iKitUmthengi.ioukuthontsizaI-ElasticEmailGetResponsehubspotNxibelelanaInfusionsoftklaviyoNdinguMimimailchimpIposiUmpu weposiimeyileIposi yeposiMailsterMailWizzI-MauticMoosendAmanyathelo amaninzi avelayoukucofa ii-popupsmzantsiokupoqayoUjoliso oluvelayoThumela iFoxThumelaSendinBlueSendlaneThumela ukufikelelaUyathunyelwaSimplyCastIyonke Thumelaukuphendula ngokuthe nkqoWordPressIplagi enegama elivelayozapper
Douglas Karr Monday, October 19, 2020 Wednesday, February 9, 2022
Ukuseta njani ukukhanya kwamanqaku ama-3 kwiiVidiyo zakho eziBukhoma
Isandi somculo: Yenza iNdwendwe kwiPodcast yakho kwiLifu